Dhibaaato Aan weli xalo loo helin, cidina isku dayi inay xal ka gadhin
Wednesday March 18, 2020 - 09:06:29 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Dhibaaato Aan weli xalo loo helin, cidina isku dayi inay xal ka gadhin Sida aynu ka war qabano gebi aahanba waxa lidata ka.diyaar garowga geedi socodka nololsha somalida ,somalida waxay tagan tahy halkii dunida ka.abuuranty wax usoo kordhay majiro waxaa ay dawldaha addunku gadhay hurmar la taabankaro se somalida gebi aahanba wax horu maraan daaye wax kasii.hoose marayaan halkii hore
Waxay ka aradan yihiin dhamman wqx kasta oo ay ku horu marikaraan dadkooda
Siyaasada somaliada utaalaa ma dhafisana rer hebel kursiga hasta iyo sidee uga wareejina , taa wax kasii daran weli ma arga qof somaliyeed oo qeexaya mustaqabalka somalida oo odhamanya war ileen dib aynu usoconaye xagee ku soconaaa!
Mar keliya indhahaagu qaban maayan wax hormar waara oo ummada loo qabto
Maanta addunka waxa lagu hogaamiyaaa Aqoon ama Dhaqaale somalida
Aqoon la,aani ma hayso oo qof kasta oo dalka maddax ka noqdaa wax la odhanyaa wax usitaa ugu yaraan levelka 1aad waxbarashada (Degree) ama waaba kasiisareyaaa.
Laakin se ma fakeryo hal marshuu oo dhaqaale abuura oo uu sameyo sabtana garan maayo ! ,se wax uu qayanaa sida lacagta loo ga uriyo muwdinta naftoodiba ka baqtiyo, maanta somali.meelkasta oo ay joogto waa ta ugu baahida badan addunka
Qofka somali ahi ma heli karo baahiyii nololeed ee u doortay maamulka jira sida
#iyo dhamman bahiyada bushada (social needs)
# dhaqaale abuur.
Kuwasi oo aha wax ugu mihimsan ee addunyada laga fekero sidii loo horumarin lahaa bulsho.
Tale majiro fekerad keliya oo somalidu ka qaadanyso xoojinta wax soosaarka dalka,
Sidii looga bixi lahaa dhibatada ina haystay awow ka awooe ee aynu iska dhaxalnay aqoonyan , gacansde iyo.dawlda
Bulshada wax hormuud unoqda maamulka markaa jira kasoo bilaaba lagu abuurayo hor dhaqaale wax soo sarka beeraha oo la sameyo si looga baxo baahida ina haysta
Dhammanteen ,waxna aynu kaga bixo karnaa inoo wax tabcana dhibta ugu weyna wax ka masuaha mamulda hadii maamulksta wixisa lasoo baxo somali manta sidaa ma noqteen kuna sugtee dalkle quutul.daruriga.
Somali waa dulan dulanka ayaa lagu qeexaa nolole nole kale ku dul nool
Sabata taa uleyahy wax weye somali wax ku nolshay dalkale oo ay quudk.usoo dhoofiya sidii ay u keeni lahayne arin ay kaga bqxna ma hayaaan.
Gabo gabo maabta wax aaan oganhy halista cudurkan adduunkii sida fudud ugu faafaya sida uu addunkii ugalay iyo xaalka somalida sida uu yahy .
Cudurkani wax uu sameye dhaqaale aduunka oo ku yimid hoos dhac weyn
Dadkii Aan markii horeba wax beeran nirin xaalidu waa halis maalin ma nololan karano oo wqx kasta oo aan isdicmaalo wax.ay ka imanayaa dalka debada hadii ay xidhanto ma hayno wax qorsha ahaa oo inoo yaal.
Waxay aad inaynu ka diyaar garowno nolosha lakin se way is dhigany dhammantee.
Allaha ha ina dhaafiyo dhabto kasta
Wax kasta inaad qoshe kayeelato waa muhim
Qore: mohamed abdi ali